▷ Miyaan iibsadaa LG NanoCell TV? - 【Isbarbardhigga】 2022
Miyaan iibsadaa LG NanoCell TV?
LG NanoCell 55NANO85-ALEXA - Smart TV 4K UHD 55 inch (139 cm), Sirdoonka Artificial, 100%...
Ciyaarta Pro TV: -, AMD FreeSync waafaqsan, HDR GiG, VRR / ALLM, 2xHDMI 2.1 / 2xHDMI 2.0; Istaag: 2 lugood
LG NanoCell TVs: maxay yihiin? In kasta oo aad si fiican u taqaano khadka LG ee TV-yada OLED: LG C1, LG G1, iwm. TV-yada NanoCell ee ku xiga waxay u muuqdaan inay ku yar yihiin wararka, waxaanan halkan u joognaa inaan taas hagaajinno.
Kuwaas shaashadaha loo yaqaan "NanoCell" waxay ka kooban yihiin TV-yada LCD-ga dhexe ilaa-dhamaadka-dhexe ee gelitaanka ka LG, LG TV-yada ugu fiican ee aan lahayn muraayadaha OLED, asal ahaan. Hadafka aan laga hadlin halkan waa in la bixiyo beddelka Samsung TV-yada QLED ee aadka u wanaagsan, iyadoo la qeexayo heerka koowaad ee LG LCD TV-yada.
Laakiin waa maxay dhab ahaantii LG NanoCell? Sidee loo barbar dhigaa Samsung QLED? Waa maxay sababta aad uga fikirayso inaad iibsato LG NanoCell TV? Hoos ka akhriso wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato.
Heshiisyada maanta ugu wanaagsan LG NANO
LG 55NANO806PA 4K TV, Ma khuseyso
763,00; Aad ugu habboon; Alaab tayo leh; wax raagaya
1 Su'aalaha NanoCell
1.1 Waa maxay Nano Cell?
1.2 Muxuu sameeyaa NanoCell?
1.3 Waa imisa qiimaha TV-yada NanoCell?
1.4 Telefishinkee ayaa haysta tignoolajiyada NanoCell?
1.5 Soo saarayaasha kale ma haystaan ​​NanoCell?
2 LG NanoCell TV ayaa sharaxay: Sidee u shaqeysaa?
3 NanoCell iyo QLED
4 LG NanoCell TVs ma fiican yihiin?
5 Miyaan iibsadaa LG NanoCell?
6 Waa maxay TV-yada LG NanoCell?
Waa maxay Nano Cell?
Tignoolajiyada LG ee rukhsadda leh, lakabka shaandhaynta ee dusha sare ee guddida LCD-ga ee TV-ga.
Muxuu sameeyaa NanoCell?
Waxay xoojisaa qoto dheer oo midab leh codad badan oo muuqda.
Waa imisa qiimaha TV-yada NanoCell?
Kala duwanaanshiyaha ayaa ah mid aad u weyn, laga bilaabo € 600 wuxuuna ku dhammaanayaa € 4000 moodooyinka dhamaadka-sare.
Telefishinkee ayaa haysta tignoolajiyada NanoCell?
Inta badan LG TV-yada leh NanoCell waxay leeyihiin "NANO" magacooda, laakiin mustaqbalka ee QNED TV-yada sidoo kale.
Soo saarayaasha kale ma haystaan ​​NanoCell?
Tani waa tignoolajiyada LG oo aan (wali) shati u siin shirkado kale, marka waxaad ka heli doontaa LG TV-yada hadda.
LG NanoCell TV ayaa sharaxay: Sidee u shaqeysaa?
LG weli ma sii dayn dukumeenti buuxa oo ku saabsan sida saxda ah ee LG NanoCell u shaqeeyo.. Waxay la mid tahay geedo sirta ah iyo cunto karinta udgoonka ee ka dambeeya KFC Chicken dareenkaas.
Si kastaba ha ahaatee, si fiican ayaan u ognahay waxa uu sameynayo. LG NanoCell waxay isticmaashaa lakabka shaandhada oo la geliyo TV-ga gudihiisa oo nuuga hirarka iftiinka ee gaarka ah.. Hadafka waa in la nadiifiyo wax soo saarka midabka si loo hagaajiyo qoto dheer ee midabka.
Habka ugu fudud ee tan lagu ogaan karo waa in laga fikiro rinjiga. Ma heli kartid rinji cas oo saafi ah haddii ay jiraan tilmaamo midabyo kale oo isku dhafan. NanoCell wuxuu isku dayaa inuu ka saaro wasakhdaas.
LG NanoCell TV-yada (iyo dhammaan TV-yada arrinkaas) waxay ku rinjiyeen sawirradooda midabyo yar oo buluug, cagaar, iyo casaan ah oo loo dejiyay xoojinta kala duwan. Markaa in kasta oo nuugista iftiinka ay u ekaan karto xakamaynta midabka, natiijada ugu dambaysaa waa korodhka qoto dheer ee midabka, maaddaama hirarka dhererka ee haddii kale caajisin kara kuwa-pixels-hoosaadka ah ee casaanka, buluugga iyo cagaarka ah ayaa meesha laga saaray.
NanoCell iyo QLED
LG NanoCell 2021 safka TV-ga (Sumcada Sawirka: LG)
La-talinta Palomaki waxay samaysay cilmi-baaris si ay wax badan uga ogaato NanoCell waxayna ku soo gabagabaysay taas "Isagoo sheegaya in tignoolajiyadan ay ku hawlgashay 1nm nanoparticles waa marin habaabin", ku shubidda biyo qabow duleelka sare ee LG NanoCell.
Lataliyahan ayaa aaminsan taas NanoCell waxay isticmaashaa dheeha unugyada. Qaybaheeda waxay cabbiri karaan nanometer midkiiba, hal bilyan oo mitir, laakiin taasi way ka duwan tahay tignoolajiyada Quantum Dot ee lagu arkay TV-yada Samsung QLED.
Kiristaalo Quantum Dot ayaa iftiimiya iftiinka mawjadaha dhererka qaarkood marka la keeno iftiinka ultraviolet. Samsung QLED TV-yadu gabi ahaanba kuma tiirsana tignoolajiyadan, laakiin isticmaal lakabka Quantum Dot si loo horumariyo waxqabadka midabka. NanoCell wuxuu u muuqdaa mid xoogaa caadi ah marka la barbardhigo.
Hadafka dhabta ah ee aduunka labada xaaladoodba waa isku mid. Telefishinada qaaliga ah maanta waa ku dhawaad ​​​​si buuxda DCI P3 caynsanaanta gamut midabka in badankeen aan kala saari karin waxa aan heleyno iyo 100% caymiska.
Waa maxay DCI P3? Tani waa nooc isku mid ah oo midabyo midab leh oo loogu talagalay dhowr shirkadood oo waaweyn oo wax soo saarka filimada. Waxay u ogolaataa TV-yada iyo midab-dooriyeyaasha inay go'aamiyaan sida midab gaar ah uu u ekaan karo filim ama sawir. Ku dhawaad ​​100% DCI P3 caynsanaanta waxaadna helaysaa muuqaal midab aad u qani ah oo firfircoon.
TV-yada NanoCell ee ugu fiican sida NANO90 waxay leeyihiin dabool midab aad u wanaagsan, haddii aysan ahayn heerka Samsung TV-yada cusub ee leh tignoolajiyada QLED (sida Q90T). NANO90 sidoo kale aad ayuu uga jaban yahay, marka wax qabad wax yar ka hooseeya meeshan maahan wax weyn.
LG NanoCell TVs ma fiican yihiin?
Sawirka midabka DCI P3 (Sumcada sawirka: Andrew Williams)
Meelaha kale ee tiknoolajiyada LG NanoCell TV waa kuwa kaa dhigaya inaad laba jeer ka fikirto iibsashada mid ka mid ah aaladahaas.
Dhammaan LG NanoCell TV-yada waxay isticmaalaan muraayadaha IPS. Kuwani waa qabow hab, tan iyo IPS waxay bixisaa xaglo daawasho oo aad u ballaaran. Uma baahnid inaad si dhexe u fadhiisatid TV-gaaga hortiisa si aad u aragto sawir cad.
Si kastaba ha ahaatee, Shaashadaha IPS sidoo kale waxay leeyihiin isbarbardhig aad u hooseeya marka loo eego VA panels ee lagu isticmaalo Samsung QLED TVs, ama nooca OLED ee lagu arko bandhigyada LG-dhamaadka sare sida LG CX OLED.
Sawirka laba geesoodka madow iyo caddaanka ah ee lagu soo bandhigay shaashadda IPS, qaybaha caddaanku waxay guud ahaan ahaan doonaan 1000 jeer ka dhalaal badan qaybaha mugdiga ah. Farqigani wuxuu ku kordhaa ilaa 4000-7000 jeer TV-ga VA.
Natiijada: LG NanoCell TV-yada waxay leeyihiin kala duwanaansho firfircoon oo cidhiidhi ah. Madoowgu weligood uma ekaan doonaan madowdaas qol mugdi ah, tanna waxaa u sii dheeraa la'aanta aagagga qalin-jabinta ee maxalliga ah.
Dimming maxalliga ah ayaa loo isticmaalaa inta badan TV-yada LCD-ga ugu sarreeya (ay ku jiraan NanoCell iyo QLED, kuwaas oo weli LCD ah). Tani waa halka qaybaha kala duwan ee iftiinka dambe loo isticmaali karo si madaxbannaan, taasoo ka dhigaysa qaybo ka mid ah guddidu inay ka iftiimaan kuwa kale si ay hoos ugu dhigaan dabaqa dambe oo ay hagaajiyaan isbarbardhigga.
LG NANO90 65-inji ah wuxuu leeyahay 32 aag hoos u dhac, oo ka hooseeya 50 aag ee 80-inch Samsung Q55T o 792 Vincent Teoh* lagu aqoonsaday 90-inch Samsung QN65A. Xaqiiqdina LG NANO90 wuxuu u baahan yahay wax badan, maadaama ay markii hore leedahay isbarbardhig hoose oo asal ah.
Meelo yar oo mugdi ah oo maxalli ah waxay ka dhigan tahay inaad ku arki doonto ubax agagaarka walxaha dhalaalaya. Tani waxay noqon doontaa mid si gaar ah loo ogaan karo haddii aad daawato filim leh qoraal-hoosaadyo, sababtoo ah waxaad u badan tahay inaad rabto inaad joojiso muuqaalka markaad daawato filimada luqad shisheeye.
Arrimahan isbarbardhigga ahi waxay sharraxayaan sababta LG TV-yada ugu soo jiidashada leh ee leh NanoCell aysan u ahayn TV-yadooda "NANO", laakiin ay yihiin shaashadahooda cusub ee QNED ee 2021. Khadkani waxa uu isku daraa lakabka NanoCell oo leh Quantum Dot midab kobciye iyo guddi-yar oo LED ah..
Tignoolajiyada mini LED panel waa waxa ugu xiisaha badan ee ku dhaca TV-yada LCD muddo dheer. U fiirso iftiinka dambe ee LED-yada oo sii yaraanaya, si aad u badan oo kale ayaa ugu habboon shaashadda.
LG wuxuu sheeganayaa in dhamaadka-sare ee 86-inch QNED uu yeelan doono ku dhawaad ​​​​30.000 nalka dambe ee iftiinka, oo loo qaybiyay in ka yar 2.500 oo aag. Taasi waa ku dhawaad ​​80 jeer in ka badan meelaha LG NANO90.
Hase ahaatee, weli ma uusan magacaabin maaliyaddiisa TV-ga "QNED" Nidaamyadani waxay u badan tahay inay wali isticmaali doonaan muraayadaha IPS, mana garanayno sida waxtarka leh ee tiro aad u badan oo ah meelaha wax-ka-dhimista ay u yeelan doonaan kor u qaadista farqiga xaddidan ee tignoolajiyada golahan.
Miyaan iibsadaa LG NanoCell?
Waxaan helnay dhaleeceyn ku saabsan LG NanoCell TVs. Si kastaba ha ahaatee, kuwani waxay inta badan saameeyaan isticmaalka qol mugdi ah.
Haddii aad rabto inaad qolkaaga fadhiga ka dhigto tiyaatar yar, TV-yadani maaha doorashada ugu fiican, waa inaad heshaa mid leh VA ama OLED. Sifudud ma bixiyaan wax qabad la mid ah kan Samsung ee QLEDs ugu fiican ama LG's OLED sets.
Kala duwanaanshuhu aad buu u hooseeyaa, kaas oo saameeya waxqabadkiisa nuxurka HDR iyo tayada filimada qolka iftiinka hooseeya. Si kastaba ha noqotee, waxaan ku arki karnaa natiijooyin ka wanaagsan aaladaha LG QNED, kuwaas oo sidoo kale leh tignoolajiyada NanoCell.
Si kastaba ha ahaatee, waxay ku xooggan yihiin meelaha kale. Xaglaha daawashada ballaaran waxay ka dhigan tahay doodo badan oo ku saabsan cidda ku fadhida kursiga ugu fiican. Lakabka sare ee muraayadda ka-hortagga muraayadda ayaa si fiican u diida iftiinka iftiinka. Soo gelinta hooseeya ayaa war wanaagsan u ah cayaartoyda. Cabbiraadda inta badan TV-yada NanoCell aad bay u fiican tahay sidoo kale noocyada kala duwan sare waxay leeyihiin 120Hz qiimeeyn iyo astaamo taageero sida VRR.
Isku soo wada duuboo, LG NanoCell TV-yada waa kuwo aad u qiimo badan, kuu ogolaanaya inaad isticmaasho sifooyinka muhiimka ah ee PS5 iyo Xbox Series X sida HDMI 2.1 iyo VRR adoon kharash gareynin.
Sawirka ugu weyn ee TV-yada NanoCell maanta waa inay bixiyaan astaamo heersare ah oo qiimo jaban ah, oo leh qiime jaban ilaa heerka gelitaanka moodooyinka NanoCell kuwaas oo shaki la'aan soo jiidan doona miisaaniyado yaryar oo badan.
Waa maxay TV-yada LG NanoCell?
aan qaadano si dhow u eeg noocyada kala duwan ee NanoCell ee aad ka iibsan karto maanta LG's 2020 iyo 2021, sifooyinka gaarka ah. Haddii aad xiisaynayso inaad wax badan ka ogaato oo dhan 2021Sidoo kale eeg hagahayaga LG TV 2021.
(Sumcada sawirka: LG)LG NANO99 (2020)
Waxaa lagu heli karaa: 65-inji, 75-inji
Heshiisyada ugu wanaagsan maanta ee taxanaha LG NANO99 8K
(Sumcada sawirka: LG)LG NANO96 / NANO95 (2021)
Waxaa lagu heli karaa: 55-inji, 65-inji
VRR (Sumcada sawirka: LG)
Waxaa lagu heli karaa: 55-inch, 65-inch, 75-inch, 86-inch (NANO91 kaliya)
Ma jiro hoos u dhigid maxalli ah
Heshiisyada ugufiican maanta ee LG 55NANO90
(Sumcada sawirka: LG)
Waxaa lagu heli karaa: 50 inji, 55 inji, 65 inji, 75 inji
HDMI 2.1 (Sumcada sawirka: LG)
Waxaa lagu heli karaa: 55 inji, 65 inji, 75 inji, 86 inji
Processor ka fudud
Daawo TV-ga ugu wanaagsan ee maanta jira
LG 43NANO796PB 4K NanoCell, SmartTV 43" webOS 6.0, 4k Quad Core Image Processor, Isku xidhka...